Ny milina fanaovana laser Laserartist CO2 manome sokajy isan-karazany dia azo atao. Maromaro kokoa noho ny mpanamboatra router na ny milina fanodinana, ny mpandika laser laser dia afaka manamboatra zavatra sy vokatra vita amin'ny hazo haingana sy mora foana, solomaso sokitra na kaopy seramika, etch amin'ny vato na plastika, marika vy mifono ...
Ny fahombiazan'ny milina fanamarihana laser dia hihena miadana rehefa avy ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra. Inona no anton'izany? Inona avy ireo antony lehibe manimba ny kalitaon'ny marika fanamarihan'ny milina? 1. Ny toerana ifantohan'ny masinina fanamarihana laser Ny toerana ifantohan'ny marika laser ...
Antony misy fiantraikany amin'ny vidin'ny milina fanapahana laser
Ireo singa amin'ny vidin'ny vokatra: amin'ny ankapobeny, ny vidin'ny vokatra dia tsy ho an'ny fitaovana sy ny milina ihany, fa ho an'ny R&D, QC, aorian'ny serivisy fivarotana, ny vidin'ny mpiasa, ny vidin'ny lisitra, ny vidin'ny renivohitra sns. Ka tokony hojerenao hoe inona avy ireo lafin-javatra tianao kokoa. Rehefa misafidy kalitao ianao, ...